Iqela leFraport: Izithuthi zabakhweli ziyaqhubeka ukwanda ngo-Okthobha wama-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Iqela leFraport: Izithuthi zabakhweli ziyaqhubeka ukwanda ngo-Okthobha wama-2021
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Xa kuthelekiswa nobhubhane wangaphambili ngo-Okthobha ka-2019, uninzi lwezikhululo zeenqwelo moya kwipotfoliyo yamazwe ngamazwe yaseFraport zisabhalisa amanani asezantsi abakhweli.
Izikhululo zeenqwelomoya zeQela leFraport kwihlabathi jikelele zinika ingxelo entle yokusebenza kwabakhweli kwinqwelomoya.
Isikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt sifezekisa ukukhula olomeleleyo kwempahla.
Umthamo wetrafikhi kwezinye izikhululo zeenqwelomoya unyuke ngaphezulu kwe-100 leepesenti unyaka nonyaka, nangona uthelekisa nokunciphisa kakhulu amanqanaba ezithuthi ngo-Okthobha wama-2020.
Ukufumana owona mthamo uphezulu wenyanga wezithuthi ukusukela oko kwaqhambuka ubhubhani we-COVID-19, Isikhululo senqwelomoya saseFrankfurt (FRA) yamkela abakhweli abamalunga nezigidi ezi-3.4 ngo-Oktobha 2021. Oku kubonisa ukwanda kwe-218.5 ekhulwini ngonyaka, nangona kuthelekiswa no-Oktobha obuthathaka kakhulu ka-2020.
Ukuthuthwa kwabakhweli be-FRA kuphinde kwanda ukuya ngaphezulu kwesiqingatha senqanaba lobhubhane oluxelwe ngo-Okthobha wama-2019 (ehle ngeepesenti ezingama-47.2). Ngexesha likaJanuwari ukuya ku-Okthobha ka-2021, bebonke babakhweli abazizigidi ezili-19.2 bahambe ngesikhululo seenqwelomoya saseFrankfurt. Xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kulo nyaka uphelileyo, oku kubonisa ukunyuka kwe-11.5 yeepesenti ngo-2020, kunye ne-68.3 yeepesenti yehla ngo-2019.
Ukuhanjiswa kwempahla, equka uthutho ngenqwelomoya kunye ne-airmail, iqhubekile ikhula ngokubonakalayo nge-10.0 yeepesenti unyaka nonyaka ukuya kuma-200,187 eetoni zeemetric kwinyanga yokunika ingxelo (inyuke ngeepesenti ezili-11.7 xa kuthelekiswa no-Okthobha wama-2019). Iintshukumo zeenqwelo moya zinyuke nge 75.4 yepesenti unyaka nonyaka ukuya kwi 30,004 zokunduluka nokuhla ngo-Okthobha 2021. Ubunzima obuninzi bokusuka (MTOWs) bunyuke nge 63.1 pesenti unyaka nonyaka ukuya phantse kwi 1.9 yezigidi zeetoni zeemetric.
Iqela leFraport Izikhululo zeenqwelo moya kwihlabathi jikelele ziqhubekile nendlela yazo entle yabakhweli ngo-Okthobha wama-2021. Uninzi lwazo lufumene ukukhula okubalulekileyo kwabakhweli. Umthamo wetrafikhi kwezinye izikhululo zeenqwelomoya unyuke ngaphezulu kwe-100 leepesenti unyaka nonyaka, nangona uthelekisa nokunciphisa kakhulu amanqanaba ezithuthi ngo-Okthobha ka-2020. UFraport's ipotifoliyo yamazwe ngamazwe isabhalisa amanani asezantsi abakhweli. Nangona kunjalo, ezinye izikhululo zeenqwelo moya zeQela ezibonelela abakhenkethi abakwimfuno ephezulu-ezinje ngezikhululo zeenqwelomoya zaseGrisi okanye iAntalya Airport kwiTurkish Riviera – zabona itrafikhi iphinde yaya kuthi ga kwipesenti ezingama-90 zenqanaba lengxaki yangaphambili erekhodwe ngo-Okthobha ka-2019. Isikhululo seenqwelomoya saseSt. ithumele i-5.7 yepesenti yokunyuka kwezithuthi kwinyanga yokunika ingxelo xa kuthelekiswa no-Okthobha wama-2019.
Isikhululo seenqwelomoya saseSlovenia saseLjubljana (LJU) samkele abakhweli abangama-57,338 ngo-Oktobha 2021. EBrazil, izithuthi ezidityanisiweyo kwizikhululo zeenqwelomoya ezimbini zaseFortaleza (FOR) nasePorto Alegre (POA) zinyuke zaya kutsho kuma-908,553. Isikhululo seenqwelomoya saseLima (LIM) ePeru sanceda abakhweli abamalunga nesigidi esi-1.2 kwinyanga yokunika ingxelo. Kwizikhululo zeenqwelomoya zengingqi ezili-14 zaseGrike, itrafikhi iyonke ihambele phambili malunga nabakhweli abazizigidi ezi-2.4. Izikhululo zeenqwelomoya iTwin Star zaseBurgas (BOJ) kunye neVarna (VAR) kunxweme loLwandle oluMnyama lwaseBulgaria nazo zinike ingxelo yenzuzo yendlela, inika abakhweli abayi-111,922 bebonke ngo-Okthobha wama-2021. Isikhululo seenqwelomoya saseAntalya (AYT) eTurkey yayinabakhweli abamalunga nezigidi ezi-3.8. Bangaphezu kwe-1.8 yezigidi abakhweli abasetyenzisiweyo Isikhululo seenqwelomoya sasePulkovo (LED) Petersburg, ngelixa iSikhululo seenqwelomoya saseTshayina iXi'an (XIY) samkele abakhweli abamalunga ne-1.9 yezigidi kwinyanga yokunika ingxelo.